သင့်အသားအရေကို သင်တကယ်ပဲ ဂရုစိုက်ပါသလား? | Buzzy
သင့်အသားအရေကို သင်တကယ်ပဲ ဂရုစိုက်ပါသလား?
မိမျက်နှာအသားအရေလေးကိုလည်း ကလေးလေးတစ်ယောက်ကို မွေးမြူသလို ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်တွေကို သိရှိနားလည်ပြီး သေချာအသိကပ် ပြုစုသင့်ပါတယ်။
အသားအရေကိုဂရုစိုက်တယ်ဆိုတာ ကလေးငယ်တစ်ယောက်ကို ပြုစုစောင့်ရှောက်ရသလိုပါပဲ။ ဘယ်အာဟာရ၊ ဘယ်အပြုအမူတွေက ဒီကလေးကို ကျန်းမာစေမယ် ဖွံ့ဖြိုးလှပစေမယ်၊ ဘာတွေကတော့ ဒီကလေးအတွက် အန္တရာယ်ဖြစ်စေလို့ ရှောင်သင့်တယ် စသည်ဖြင့် သိရှိနားလည်သင့်သလို မိမိမျက်နှာအသားအရေလေးကိုလည်း ကလေးလေးတစ်ယောက်ကို မွေးမြူသလို ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်တွေကို သိရှိနားလည်ပြီး သေချာအသိကပ် ပြုစုသင့်ပါတယ်။
ဒါဆို အသားအရေကို ဂရုစုိုက်တဲ့အချိန်မှာ ဘယ်လိုအရာတွေကို ရှောင်သင့်သလဲဆိုတာ အရင်အဓိကပြောလိုပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကာကွယ်ခြင်းဟာ ကုသခြင်းထက်ပိုပြီးထိရောက် အရေးပါလို့ပါနော်။ ဖြစ်သွားပြီးမှ ပြန်လည်ကုစားနေရတာ အင်မတန်စွန့်စားရပြီး risk များလွန်းလို့ပါ။
အသားအရေကို ဂရုစုိုက်တဲ့အပိုင်းမှာ သန့်စင်ခြင်း နဲ့ ထိန်းသိမ်းခြင်း ဆိုပြီး ၂ပိုင်းရှိပါတယ်။ အသားအရေကို သေချာသန့်စင်ပေးမှသာ မကောင်းတဲ့အညစ်အကြေးတွေကို အသားအရေမှပုံမှန်ဖယ်ရှားပေးကာ ကျန်းမာလတ်ဆတ်တဲ့အသားအရေကိုရရှိနုိုင်မှာဖြစ်ပြီး၊ နောက်ပိုင်း ထိန်းသိမ်းတဲ့အဆင့်က အာဟာရတွေကို သေချာစုပ်ယူနုိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သန့်စင်ခြင်းအပိုင်းဖြစ်တဲ့ မိတ်ကပ်၊ အဆီနဲ့ ကြေးညှော်များကို cleanser နဲ့ဖယ်ရှားပြီး မျက်နှာသစ်တဲ့အခါမှာ မျက်နှာသစ်ခြင်းမှန်ကန်ဖို့က အဓိကကျပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ မှန်ကန်တဲ့မျက်နှာသစ်နည်းဆိုတာ အချိန်မှန်ကန်စွာသစ်ခြင်းနဲ့ မျက်နှာကို ဘယ်လောက်ကြာကြာသစ်သလဲ၊ ဘယ်လို မှန်ကန်တဲ့မျက်နှာသစ်ဆေးရွေးချယ်လဲဆိုတာလည်း ပါလာပါတယ်။ မျက်နှာသစ်တဲ့အခါမှာ မျက်နှာပေါ်က ဆီနဲ့ ချေးညှော်များကို ပြောင်စင်အောင်ဆိုပြီး အကြာကြီးသစ်တာ၊ မျက်နှာကို လက်သည်းနဲ့ကုတ်ပြီးသစ်တာတွေဟာ မှားယွင်းတဲ့အယူအဆတွေဖြစ်ပါတယ်။ မျက်နှာကို မျက်နှာသစ်ဆပ်ပြာတွေနဲ့ အကြာကြီးပွတ်ပြီးသစ်နေတာ၊ ဆပ်ပြာတွေကို မျက်နှာပေါ်မှာ မိနစ်နဲ့ချီပြီးထားတာဟာ အသားအရေကို ခြောက်သွေ့ပျက်စီးစေတယ်ဆိုတာ သတိချပ်စေလိုပါတယ်။ မျက်နှာသစ်တဲ့အခါ မိမိအသားအရေနဲ့ အဆင်ပြေတဲ့ မျက်နှာသစ်ကို ရွေးချယ်ပြီး စက္ကန့် ၃၀လောက်သာ နှိပ်နယ်ပြီး သစ်ပေးသင့်ပါတယ်။
မျက်နှာအသားအရေကို သန့်စင်တဲ့အချိန်မှာကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့ ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းပေးဖို့ကမ္ဘာ့နံပါတ်တစ်အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာ အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်တဲ့ NIVEA က WHIP မျက်နှာသစ်ကို စတင်မိတ်ဆက်လိုက်ပါပြီ။
NIVEA Whip မျက်နှာသစ်ရဲ့ Pearl White Whip မျက်နှာသစ် နဲ့ Pearl White Super Mousse တို့မှာ အသားအရေကို ဖြူဝင်းချောမွေ့စေတဲ့ ပုလဲအဆီအနှစ် အဓိကပါဝင်ပါတယ်။ White Oil Clear မှာတော့ ဖြူဝင်းစေခြင်းအပြင် အဆီပြန်တာကိုပါ သိသိသာသာထိန်းထားပေးတဲ့ Carnitine ပါဝင်ပါတယ်။